တိုင်းပြည်ရဲ့ မိခင်ကြီးကျန်းမာရေးကိုကြားသိလိုက်တာကြောင့် နေကောင်းကျန်းမာဖို့အတွက် အမြဲဆုတောင်းပေးနေတဲ့ R ဇာနည်…. – Cele Oscar
တိုင်းပြည်ရဲ့ မိခင်ကြီးကျန်းမာရေးကိုကြားသိလိုက်တာကြောင့် နေကောင်းကျန်းမာဖို့အတွက် အမြဲဆုတောင်းပေးနေတဲ့ R ဇာနည်….
September 14, 2021 By L YC Knowledge
အဆိုတျော R ဇာနညျ ကတော့ နှဦေးတျောလှနျရေး မှာ တဈထောငျ့ တဈနရောကနေ လှုပျရှားခဲ့တာဖွဈလို့ အခုခြိနျမှာသူ့ရဲ့လုံခွုံရေးကို ဂရုစိုကျနရေတာပဲဖွဈပါတယျ။မိသားစုအတှကျလညျး အန်တရာယျကငျးအောငျ လို့ အခုခြိနျမှာ R ဇာနညျ က အဝေးတဈနရောကို ရောကျရှိနတောပဲ ဖွဈပါတယျ။R ဇာနညျက မိသားစုနဲ့ခှဲခှါပွီး တိမျးရှောငျနေ ရပမေယျ့ ပွညျသူတှနေဲ့တဈသားတညျး ရပျတညျပွီး ပနျးတိုငျ ဆီကို အတူတူလြှောကျလှမျးနတော ဖွဈပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ လှတျမွောကျ နယျမွရေောကျရှိနကွေတဲ့ ပွညျသူတှနေဲ့ အနုပညာရှငျ တှကေလညျး တတျနိုငျတဲ့ နရောကနကွေိုးစားနကွေတာ ဖွဈပါတယျ။မနကေ့ဆိုရငျ အမစေုရဲ့ရုံးခြိနျးနေ့ ဖွဈပွီး တရားရုံး သှားရငျး ခေါငျးမူး လို့ပွနျလှညျ့လာခဲ့ရတဲ့သတငျးကို ပွညျသူတှေ ကွားသိခဲ့ရပါတယျ။ဒါ့ကွောငျ့ အမစေုရဲ့ကနျြးမာရေးအတှကျ ပွညျသူတှကေစိုးရိမျပူပနျနကွေပွီး အမွနျနကေောငျးကနျြးမာဖို့ အတှကျ ဆုတောငျးပေးနကွေတာ ဖွဈပါတယျ။
R ဇာနညျကလညျး အမစေုကို လေးစား ခဈြခငျသူတဈယောကျ ဖွဈတာကွောငျ့ နတေို့ငျးလိုလို နကေောငျး ကနျြးမာဖို့ဆုတောငျးပေးနကေဖြွဈပါတယျ။ပွညျသူတှလေညျး အခုခြိနျမှာ အခကျအခဲ၊အတားအဆီးတှနေဲ့ကွုံတှနေ့ရေပမေယျ့ အမစေု ကိုလညျး စိတျပူနကွေတာဖွဈပါတယျ။R ဇာနညျလိုပဲ တခြို့ပွညျသူတှကေ
အမစေုရဲ့ကနျြးမာရေးအခွအေနကေောငျးမှနျဖို့ ဘုရားရှိခိုးတိုငျးဆုတောငျးပေးနကွေ ကွောငျးကို ပွနျလညျမြှဝပေေးလိုကျပါတယျ။
အဆိုတော် R ဇာနည် ကတော့ နွေဦးတော်လှန်ရေး မှာ တစ်ထောင့် တစ်နေရာကနေ လှုပ်ရှားခဲ့တာဖြစ်လို့ အခုချိန်မှာသူ့ရဲ့လုံခြုံရေးကို ဂရုစိုက်နေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုအတွက်လည်း အန္တရာယ်ကင်းအောင် လို့ အခုချိန်မှာ R ဇာနည် က အဝေးတစ်နေရာကို ရောက်ရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။R ဇာနည်က မိသားစုနဲ့ခွဲခွါပြီး တိမ်းရှောင်နေ ရပေမယ့် ပြည်သူတွေနဲ့တစ်သားတည်း ရပ်တည်ပြီး ပန်းတိုင် ဆီကို အတူတူလျှောက်လှမ်းနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် လွတ်မြောက် နယ်မြေရောက်ရှိနေကြတဲ့ ပြည်သူတွေနဲ့ အနုပညာရှင် တွေကလည်း တတ်နိုင်တဲ့ နေရာကနေကြိုးစားနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။မနေ့ကဆိုရင် အမေစုရဲ့ရုံးချိန်းနေ့ ဖြစ်ပြီး တရားရုံး သွားရင်း ခေါင်းမူး လို့ပြန်လှည့်လာခဲ့ရတဲ့သတင်းကို ပြည်သူတွေ ကြားသိခဲ့ရပါတယ်။ဒါ့ကြောင့် အမေစုရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက် ပြည်သူတွေကစိုးရိမ်ပူပန်နေကြပြီး အမြန်နေကောင်းကျန်းမာဖို့ အတွက် ဆုတောင်းပေးနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
R ဇာနည်ကလည်း အမေစုကို လေးစား ချစ်ခင်သူတစ်ယောက် ဖြစ်တာကြောင့် နေ့တိုင်းလိုလို နေကောင်း ကျန်းမာဖို့ဆုတောင်းပေးနေကျဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေလည်း အခုချိန်မှာ အခက်အခဲ၊အတားအဆီးတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပေမယ့် အမေစု ကိုလည်း စိတ်ပူနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။R ဇာနည်လိုပဲ တချို့ပြည်သူတွေက အမေစုရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေကောင်းမွန်ဖို့ ဘုရားရှိခိုးတိုင်းဆုတောင်းပေးနေကြ ကြောင်းကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ရှားပါးမျိုးစိတ် သတ္တဝါ သင်းခွေချပ်လေး တစ်ကောင်အား အဆင့်ဆင့် ကယ်တင်ခဲ့ပုံကို ရိုက်ပြလာတဲ့ အောင်မြင့်မြတ် ရဲ့ဗီဒီယို…
လက်ရှိမှာ ကျန်းမာရေးအခြေအနေ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာလို့ ဆေးရုံကဆင်းခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ ဟာသ သရုပ်ဆောင် ဦးချစ်စရာ…….
လိုင်းပေါ်မှာပြန့်နေတဲ့ စကားလေးကို ဟာသလေးနှောပြီး ပြန်ပြောထားတဲ့ ကိုဘင်း……
ရှေးမြန်မာတို့ရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်ပုံလေးတွေနဲ့ တမျိုးလှပနေတဲ့ မအေးသောင်း…….
“စနစ်တကျ ကာကွယ်မှု့တွေ လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ” အားပေးရမှာပေါ့လို့ ပြောလာတဲ့ အကယ်ဒမီ ရန်အောင်…….
အဆိုတော် ကျားပေါက် ရဲ့ ဂီတာလေး နာရီပိုင်းအတွင်း သိန်း220 ကျော်လေလံကြေးရရှိ……
“ကျွန်မတို့က အဖြူရောင်အနုပညာရှင်တွေပါ အနုပညာရှင်ဟာအနုပညာရှင် နေရာမှာပဲ နေရမှာပါ” ဆိုတဲ့သရုပ်ဆောင် ဒေါ်နွဲ့နွဲ့စန်း…..
© Cele Oscar 2021 Cele Oscar2021 • Themaga powered by WordPress